Isteediyeemonni Waancaan Addunyaa bara 2018 irratti taphatamu maal fakkaatu? - BBC News Afaan Oromoo
Isteediyeemonni Waancaan Addunyaa bara 2018 irratti taphatamu maal fakkaatu?
Kutaa bulchiinsa kaaliningIraad qarqara galaana gurraachaa ykn 'black sea' hanga hundee gaara Uuraal, Ekaatenbargitti fagenya 2900km keessatti Istaadiyeemonni ijaaraman 12 taphoota Waancaa Addunyaa 64 keessumeessu.
Isaan haaraa ijaaraman keessaa istaadiyeemi inni guddaafi kan daawwattoota 81,000 qabachuu danda'u akkasumas irra deebiin bara 2018 bakka dulloomaa Mooskoo duraaniitti kan baname Istaadiyeemii Luuziniikidha.
Taphi baninsaa Waancaa Addunyaa baranaas gaafa waxabajji 14 akkasumas xumurri tapha waancichaas guyyoota 31 booda achumatti gaggeefama.
Istaadiyeemii Luuzinikii Mooskoo
Dandeettii baayina namoota qabatu: 81,006*
Kan ijaarame: bara 1956 (irra deebiin bara 2018 haarome)
Haala qilleensaa : ol'aanaa 23C and gadi aanaa 18C akkasumas carraan roobaa dhibbantaa 50
Argama : Magaalaa guddittii Raashiyaa Mooskoo karaa lixaa naannoo laga Mooskiivaatti argama. Gidduu gala magaalittii irraa kiloo meetira jaha fagaatee argama.
Seen-duubee: Istaadiyeemiin Luuziniikii duraan Senteraal Leeniin Istaadiyeem jedhamee waamama ture. Waan gaarii fi yaraa dirree keessumeessedha. Istaadiyeemichi guyyoota 450 keessatti bara 1955-1956'tti ijaaramee xumurame.
Kun erga atileetonni Sooviyeet Raashiyaa bara 1952 meedaaliyaawaan 71 Olompikii Heelsinkii irraa argatanii deebi'anii kaka'umsa mootummaadhaan ijaarame.
Humna namoota kuma 100 qabachuu qaba ture. Bara 1980's Olompikiin Mooskoo bakkatti qophaa'edha. Kun bakkatti pirezidantiin Federeshinii waldaalee Atileetiksii Idila Adunyaa (IAAF) ammaa Seebaastiyaan Kooy fiigicha meetira 800 fi 1500'n seenaa itti galmeessan ture.
Garuu waggota lamaan booda tapha waancaa Awurooppaa Liigii Ispaartaak Mooskoo fi kilabii biyya Dachii Haarlem irratti dirreedhaa bahuuf osoo fiiganii lubbuun namoota 66 darbe.
Bara 1990 irra deebiin haareffamee maqaansaa Luuziniikii jedhamuun moggaafame, ''lagarratti waan argamuuf lolaa laga Mooskaavaa irraa akka jechuuti.
Ergasii tapha waancaa liigii awurooppaa bara 1999 Paarmaan Maarsee inifatee fi bara 2008 taphni xumura chaampiyoonsiliigii Maanchistar Yunaayitid rukuttaa peenalitiidhaan Chelsii iniifate asirrati gaggeefame.
Ammas irra deebiin haareffamuun toorri jorroo fiigichaa irraa ka'uun bifa addaan banameera.
Istaadiyeemii Ispaartaak, Mooskoo
Istaadiyeemiin gara biraan deeggartoota kuma 43 qabachuu danda'u Ispaartaak Mooskoo dha. Yeroo 22'f liigii Raashiyaa injifachuu kan danda'e Ispaartaak Mooskoon kan irratti taphatudha.
Karaa alaan yommuu ilaalan Diyaamandiidhaan kan faayamedha.
Afrikaa bakka bu'uun kan dorgoman biyyoonni akka Seneegaalii fi Tuuniziyaa tapha ramaddii garee isaanii asirratti gaggeessu.
Ogeessonni Wembileey isa haaraa fi dirree Arsenaal Imireetis hojjetan kanas bareechanii hojjetaniiru. Namoota kuma 45 qabachuu danda'a.
Bishaan daakuu fi kanneen biroof ooluu kan danda'u istaadiyeemii hunda galeessadha.
Tilmaama guddaa kan argatan kan akka Faransaay, Ispeen fi Jarman tapha ramaddii isaanii jalqabaa as irratti gaggeessu.
Istaadiyeemii beekamaa Baayermuunik Aliyaanz Areenaa waliin wal fakkaatee kan hojjetame istaadiyeemichi namoota kuma 35 qabachuu danda'a.
Waancaa Adunyaan booda taa'umsi kuma 10 istaadiyeemicha kan irraa hir'atu yoo ta'u taphoonni biyyoota Afrikaa biroo akka Naayijeeriyaa fi Morookoo tapha ramaddii isaanii as irratti gaggeessu.
Waancaan Addunyaa gaafa Waxabajji 14 haala ho'aa taheen banama jedhamee eegama.